खेलकूदका हस्ती वली क्वारेन्टाइनमा ! NewsButwaltoday
खेलकूदका हस्ती वली क्वारेन्टाइनमा !
बुटवल टुडे संवाददाता नेपालगञ्ज
भिम वली खेलकूद विकास समिति प्रदेश नं. ५ का निवर्तमान अध्यक्ष हुन् । खेलकूद क्षेत्रमा उनको सक्रियता अविस्मरणीय नै छ । उनको नेतृत्वमा आठौं राष्ट्यि खेलकूद प्रतियोगिता २०७५ बाँकेको नेपालगञ्जमा सफलताका साथ सम्पन्न समेत भइसकेको छ ।
वली बाँकेको खजुरा गाउँपालिका निवासी हुन् ।
लकडाउनसँगै भीम वली खेलकूद क्षेत्रमा नभई कोरोना बिरुद्दको अभियानमा गाउँमै सक्रिय भइ काम गरिरहेको बताउँछन् । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा दिन बित्ने गरेको र धेरैजसो समय क्वारेन्टाइनमै रहने गरेको उनले बताए । खजुरा गाउँपालिकाको कोरोना बिरुद्दको काममा खटिइरहेको छु दैनिकी सुनाउँदै वलीले बुटवल टुडेसँग भने, बिहान उठ्यो मास्क र पञ्जा लगायो अनि क्वारेन्टाइनतिरको काममा हिड्यो ।
उनका अनुसार कोरोना बिरुद्दको अभियानमा खजुरा गाउँपालिकामा २ वटा क्वारेन्टाइन बनेको छ । वार्ड स्तरको क्वारेन्टाइन पालिकाको वडा नं. ४ मा रहेको प्रदेश कृषि तालिम केन्द्रमा बनेको छ । त्यहाँ १५ जना थिए अहिले उनिहरुले दुई हप्ता पूरा गरेपछि घर फर्किएका छन् ।
खजुरा पालिका स्तरीय क्वारेन्टाइन भने वडा नं. १ मैटवा मावि, राधापुरमा संचालनमा रहेको वली बताउँछन् । त्यहाँ ५३ बेडमा ५१ थिए, अबधि पुगेकालाई घर पठाएपछि अहिले ३१ जना बसिरहेका छन् । उनिहरु झापा, पूर्वी नवलपरासी, जाजरकोट, दैलेख, प्यूठान र खजुरा गाउँपालिकाका हुन् । उनिहरु धेरैजसो भारतमा रोजगारी गरी फर्किएका हुन् भने त्यसमध्ये ४ जना कतार, ३ जना दुबईबाट आएका नेपाली हुन् ।
क्वारेन्टाइनलाई एक व्यक्ति एक बेड, वाईफाई, स्कुललाई तारबार गरि घेरिएको छ भीम वली बताउँछन् । उनका अनुसार क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्थानीय रुपमा २० जनाको व्यवस्थापन समिति छ । समितिले खाना आफै तयार गरी खुवाउने प्रबन्ध गरेको छ ।
आइसोलेसन अस्पतालको पूर्व तयारी पूरा भयो । ५० वेडको रहेको मंगलवारदेखि शुरु हुन्छ । आईसीयू ५ वटा छ । अक्सिजन, सिटिस्क्यानको व्यवस्था गरिसकिएको छ । भेन्टिलेटर ४ वटा तयारी गरिदैछ । प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले क्वारेन्टाइन र कोरोना आइसोलेसन अस्पतालको अवलोकन गरी फर्किएका छन् ।
अपडेट : 2020-04-06 14:50:51
कपिलवस्तुका पूर्व क्रिकेटरले दिए नीजी अस्पताल आइसोलेशनका लागि
बुटवलको राहत कोषमा लन टेनिस खेलाडीको सहयोग
पुलिसलाई हराउदै आर्मी विजयी
‘सहअस्तित्व र सदाचार कायम गर्न सकौं’